फेरि २५ दिन सम्पुर्ण बजार,यातायात बन्द रहने गरि लकडाउन गरिने, भर्खरै भयो यस्तो निर्णय ! हेर्नुहोस – Dainik Sangalo
October 5, 2020 2760
काठमाडौँ- दशैँ, तिहार तथा छठ मुखमा फेरि लकडाउन हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार भन्दा धेरै भए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्न नसक्ने भन्दै लकडाउन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेको छ । तीन दिनअघि गरेको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा स्वास्थ्यमन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेसँगै सर्वसाधरणमा फेरि लकडाउन हुनसक्ने आशंका बढेको छ । यसबीच स्वास्थयमन्त्रालयका प्रवक्ता सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले “धेरैको चासो यतिखेर दशैँ-तिहारमा फेरि लकडाउन गरिन्छ कि भन्नेमा छ। तर त्यसको जबाफ त्यही २५ हजारको सीमासँग जोडिने” बताएका छन् ।
यसअघि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाइएपछि केही जिल्लामा सङ्क्रमणको दर नरोकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सङ्क्रमणबाट निको दर पनि केही सातायता ७० प्रतिशतभन्दा माथि कायम छ। शुक्रवार नेपालमा सङ्कक्रमितको कुल सङ्ख्या ७० हजार नाघेको थियो। रोगमुक्तहुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या ५१ हजार ८ सय पुग्दा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १८ हजार नाघेको थियो।
Prevदशैंको बेला “लक डाउन” बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका द्वारा जरुरी सूचना जारी…
Nextनवलपरासीमा महिलाको दुबै कान का-टेर गहना लु’टपाट, महिलाको उपचार हुँदै,
चीनमा फेरि देखिए कोरोना संक्रमित, एकै दिन ६८ जनामा संक्रमण